Mercer Foods - Best Vabudirire Ndinoda Dried Food
Mercer Chikafu chave chikamu cheThrive Freeze Dried Foods “Upenyu Hwakanaka”. Makore mashoma apfuura anga achishamisa. Thrive Life yave mutungamiriri mukuomesa nechando uye inoramba ichitenderedza misoro pasirese sezvo hupenyu hweThrive huchiita zvinhu zvirinani.; zvine hunyanzvi uye tekinoroji yepamusoro. Thrive Hupenyu yakasimudza bara nechando yekuomesa mhando uye maitiro, asi isu hatigumiri ipapo. Sezvo chikafu chakaomeswa nechando chinowedzera kuwanda, Thrive Hupenyu icharamba ichimira pachena semhando yepamusoro chigadzirwa chiripo!
Nekukura mupfungwa, Thrive Life has declared the immediate merger with a freeze dry company in California called “Mercer Foods.” Mercer foods llc operates out of Modesto CA (Mercer zvokudya modesto) inonyanya kuomesa michero yakaomeswa nemiriwo, uye inotengesa kuindasitiri yebasa rekudya, pamwe chete nezvimwe zvinogadzira. Ichi chiziviso chinopa Thrive Hupenyu kuwanda kwakawanda kuwana kuomesa chando, zvimwe zvigadzirwa zvekugadzira, vatengesi nevarimi, pamwe chete nemaitiro ane ruzivo nevanhu. Kuomesa nechando kunochengetedza chimiro, color, flavour uye zvinovaka muviri zviri muchikafu nekubvisa mwando semhute muvacuum.
Isu tinofara zvikuru nechiziviso ichi uye tine chivimbo chekuti izvi zvichatibatsira kukura zvakanyanya! Ichi chiziviso chakanangana nekuzvigadzirira isu pachedu kukura kunoshamisa.